a မရွေးချယ်ခင် ဓာတ်မြေသြဇာခြောက်သွေ့စက်သင်၏ခြောက်သွေ့မှုလိုအပ်ချက်များကို ဦး စွာဆန်းစစ်ရန်လိုအပ်သည်။
အမှုန်များအတွက်ပါဝင်ပစ္စည်းများ - စိုစွတ်သောသို့မဟုတ်ခြောက်သွေ့သောအခါမည်သည့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများရှိသနည်း။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များဖြန့်ဖြူးခြင်းကဘာလဲ။ အဆိပ်ဓာတ်၊ လောင်ကျွမ်းနိုင်သော၊
လုပ်ငန်းစဉ်လိုအပ်ချက်များ: အမှုန်များ၏အစိုဓာတ်ပါဝင်မှုကဘာလဲ အစိုဓာတ်သည်အမှုန်များအတွင်းအညီအမျှဖြန့်ဝေထားသလား။ အမှုန်များအတွက်ကန ဦး နှင့်နောက်ဆုံးအစိုဓာတ်ပါဝင်မှုလိုအပ်ချက်များကဘာတွေလဲ။ အမှုန်များအတွက်အမြင့်ဆုံးခွင့်ပြုထားသောခြောက်သွေ့အပူချိန်နှင့်ခြောက်သွေ့ချိန်ကားအဘယ်နည်း။ ခြောက်သွေ့တဲ့အပူချိန်ကိုခြောက်သွေ့အောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါသလား။
စွမ်းဆောင်ရည်လိုအပ်ချက်များ - ပစ္စည်းများကိုသုတ်သုတ်ခြင်းသို့မဟုတ်အမြဲတမ်းပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပါသလား။ ဘယ်လောက်ပစ္စည်းရပါမည် ဓာတ်မြေသြဇာခြောက်သွေ့စက် တစ်နာရီကိုင်တွယ်လား? အရည်အသွေးမြင့်ဆုံးကုန်ပစ္စည်းရရှိရန်မည်မျှကြာမည်နည်း။ ခြောက်သွေ့ခြင်းမပြုမီနှင့်အပြီးထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်သည်ရွေးချယ်မှုအပေါ်မည်သို့သက်ရောက်မှုရှိသည်ဓာတ်မြေသြဇာအခြောက်ခံစက်?
အချောထုတ်ကုန်များအတွက်အရည်အသွေးလိုအပ်ချက်များ - ပစ္စည်းသည်ကျုံ့၊ ယုတ်လျော့၊ ခြောက်သွေ့သလားသို့မဟုတ်ခြောက်သွေ့နေစဉ်အတွင်းညစ်ညမ်းသွားမလား။ ၎င်း၏နောက်ဆုံးအစိုဓာတ်ပါဝင်မှုဘယ်လောက်ယူနီဖောင်းဖြစ်ရမည် နောက်ဆုံးထုတ်ကုန်၏အပူချိန်နှင့်အသံအတိုးအကျယ်သည်အဘယ်အရာဖြစ်သင့်သနည်း။ အခြောက်လှန်းပစ္စည်းသည်ဖုန်မှုန့်ထွက်သလားသို့မဟုတ်ဒုတိယပြန်လည်ထူထောင်ရန်လိုအပ်ပါသလား။
စက်ရုံ၏ပတ် ၀ န်းကျင်အခြေအနေ - စက်ရုံတွင်ခြောက်သွေ့ခြင်းအတွက်ထုတ်လုပ်ရန်နေရာမည်မျှရှိသနည်း။ စက်ရုံ၏အပူချိန်၊ စိုထိုင်းဆနှင့်သန့်ရှင်းမှုကားအဘယ်နည်း။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအရင်းအမြစ်များ၊ ဓါတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းမှန်ကန်စွာတပ်ဆင်ထားသည့်စက်ရုံသည်ဘာလဲ။ ဒေသပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများအရစက်ရုံတွင်အဘယ်ကြောင့်ဆူညံသံ၊ တုန်ခါမှု၊ ဖုန်မှုန့်နှင့်အပူစွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှုပမာဏရှိပါသလဲ။
ဤပြissuesနာများကိုစဉ်းစားခြင်းအားဖြင့်အချို့ ဓာတ်မြေသြဇာခြောက်စက် သင်၏အမှန်တကယ်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်မသင့်တော်သောအရာများကိုဖယ်ရှားလိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်ကုန်ကြမ်း၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ပြုပြင်ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများကိုအချို့ဖယ်ထုတ်ပေးလိမ့်မည် ဓာတ်မြေသြဇာခြောက်စက်မြင့်မားသောအစိုဓာတ်ပါဝင်မှုအတွက်ရေနွေးငွေ့အမျိုးအစားဖြစ်သောအလှည့်ကျသည့်စည်သဘာဓာတ်မြေသြဇာခြောက်သွေ့စက်များ၊ Mika ကဲ့သို့သောကြီးမားသောကုန်ကြမ်းများမှာရွေးချယ်မှုကောင်းမဟုတ်ပါ။ The rotary စည်ဓာတ်မြေသြဇာခြောက်သွေ့စက် ၎င်းကိုခြောက်သွေ့နေစဉ်လှည့ ်၍ လှိမ့်ခြင်းဖြင့်သယ်ယူပို့ဆောင်သော်လည်းဤ passive ပေးပို့ခြင်းသည် viscous material ကိုထွက်ပေါက်သို့ချောချောမွေ့မွေ့ပို့ဆောင်သည်။ ဤကိစ္စတွင်လိမ်စက်များသို့မဟုတ်သွယ်ဝိုက် multi-disc ဓာတ်မြေသြဇာခြောက်သွေ့စက်များသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ ဤတက်ကြွစွာဖြန့်ဖြူးခြင်းသည် mika ကို feed port မှ discharge port သို့လျင်မြန်စွာလွှဲပြောင်းနိုင်သည်။
ထို့နောက်တစ် ဦး စဉ်းစားပါ ဓာတ်မြေသြဇာခြောက်သွေ့စက် ဒါကသင့်ရဲ့အမှန်တကယ်ခြေရာနှင့်ထုတ်လုပ်မှုနေရာနှင့်ကိုက်ညီသည်။ လက်ရှိထုတ်လုပ်မှုအခြေအနေနှင့်မသင့်လျော်သောသို့မဟုတ်စျေးကြီးသောပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းသို့မဟုတ်တိုးချဲ့ခြင်းကုန်ကျစရိတ်များလိုအပ်သောဓာတ်မြေသြဇာခြောက်သွေ့စက်များကိုဖယ်ထုတ်ပါ။ မြို့တော်ဘတ်ဂျက်နှင့်လည်ပတ်မှုဆိုင်ရာကုန်ကျစရိတ်များနှင့်အခြားအချက်များကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။
သင်၏လက်ရှိခြောက်သွေ့မှုဖြစ်စဉ်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်သောဓာတ်မြေသြဇာခြောက်စက်ကိုသင်ရွေးချယ်ပါကအခြားတည်ရှိသည့်စက်ကိရိယာများရှိမရှိကိုစဉ်းစားရမည် ထုပ်စက်များ၊ ထုပ်ပိုးစက်များသိုလှောင်ရုံများနှင့်အခြားပစ္စည်းကိရိယာများသည်ဓာတ်မြေသြဇာခြောက်စက်အသစ်များ၏ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ကိုက်ညီနိုင်သည်။
ဤအစမ်းသပ်မှုရလဒ်များ, ထုတ်လုပ်သူအပေါ်အခြေခံပြီး ဓာတ်မြေသြဇာခြောက်သွေ့စက် သင်၏ခြောက်သွေ့မှုလိုအပ်ချက်များကိုအပြည့်အ ၀ ဖြည့်ဆည်းရန်အသေးစိတ်အကြံပြုချက်များလည်းပေးနိုင်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်, ဓာတ်မြေသြဇာခြောက်သွေ့စက်၏ installation နှင့်လည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်နှင့်ဓာတ်မြေသြဇာခြောက်သွေ့စက်၏နောက်ဆက်တွဲပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလိုအပ်ချက်များကိုလျစ်လျူရှုမထားသင့်ပါ။
အထက်ပါအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအကောင့်ထဲသို့ထည့်ပြီးသင်အမှန်တကယ် ၀ ယ်နိုင်သည် အသင့်တော်ဆုံးဓာတ်မြေသြဇာခြောက်သွေ့စက်.